ciidamo katirsan xarakada mujaahidiinta al shabaab oo gaaray deegaana galgala ee gobolka bari | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka ciidamo katirsan xarakada mujaahidiinta al shabaab oo gaaray deegaana galgala ee gobolka...
Mujaahidiinta ka dagaalama waqooyi bari dalkeena Somaliya ayaa tababaro usoo xiray boqolaal katirsan mujaahidiinta kuwaasi oo bilihii lasoo dhaafay tababarro ku qaadanayay deegaano hoos yimaad gobolka Bari.
Wararka ka imaanaya Bari ayaa sheegaya in dagaalyahanno farabadan oo isaga kala yimid Samaag Bari,Sool,Waqooyi Galbeed iyo Awdal ay bilihii lasoo dhaafay tababarro ku qaadanayeen baadiyaha degmada Galgala kadibna hub loo qeybiyay.
Mas’uuliyin katirsan xoogaga mujaahidiinta ayaa Kalimado u jeediyay ciidamada tababarka soo dhamaystay oo xiligaasi aad u hubeysnaa, ciidamadan tababarka dhamaystay ayaa gaarayay ku dhawaad 700 oo Askari waloow aan cadad cayiman la sheegin sababa laxariira arrimaha Milleteriga.
Shalay gelinkii dambe ayay ciidamada mujaahidiinta oo aad u hubeysan islamarkaan dul saarnaa gaadiidka dagaalka kasoo gudbeen dhulka Buuraleyda ah ee kala bara Sanaag iyo Bari waxayna usoo dhaqaaqeen dhanka Galgala.
Wadaado caan ka ahaa magaalada Boorama iyo degmada Badhan ayaa la sheegay in iyagoo saraakiil ah ay hogaaminayaan ciidamadan mujaahidiinta ah, beelaha dega Sanaag Bari,Awdal iyo Bari ayaa doonaya in ay wax ku yeeshaan dagaalka lagula jiro maamulka Ashahaadda ladirirka Puntland si halkaasi loogu dhaqo shareecada Alle.
warsom.com hooyga runta iyo xaqiiqda wararka somaliyeed si aad uhesho warar saxan oo sugan aqriso goorwaliba warsom.comSoomaaliyeed ee Warsom
Previous articlexarakada mujaahidiinta Al shabaab oo shaaca kaqaaday iney goor dhaw muqdisho kasaarayaan dawlada iyo ciidamada shisheeye
Next articleXarkada mujaahidiinta al shabaab oo gurmad kii ugu ballaarnaa kasameeyay gobalada bay iyo bokool